Jean-Michel Cousteau Resort Fiji waxay bixisaa Fasax qoys oo aan la mid ahayn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Jean-Michel Cousteau Resort Fiji waxay bixisaa Fasax qoys oo aan la mid ahayn
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Fiji News Breaking • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Lahaanshaha sawirka FIjiresort.com
Iyada oo ay qoysasku raadinayaan inay mar kale ururiyaan oo ay ku raaxaystaan ​​khibradaha la wadaago, Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji, oo ah goobta raaxada ee deegaanka ugu sareysa ee Koonfurta Baasifigga, waxay bixisaa khibrado kala duwan oo ku habboon socotada jiilka badan.
Dalxiiska Eco-Luxury Premier ee Koonfurta Baasifiga waxa uu bixiyaa hawlo-nooc-ka mid ah iyo khibradaha dhammaan
Waxay ku taal meel ku -meel -gaar ah, oo kuleyl leh oo kuleyl leh oo ku taal jasiiradda Vanua Levu oo indho -indheyneysa biyaha xasilloon ee Savusavu Bay, Jean-Michel Cousteau Resort waa baxsasho aan la qiyaasi karin oo loogu talagalay qoysaska ballaaran ee doonaya inay u abuuraan xasuus waara jiilalka mustaqbalka, nasashada, iyo tacaburka ka dib bilo ay kala maqnaayeen oo ay ku xidhmeen wada sheekaysi muuqaal ah oo aan dhammaad lahayn.
Safarka jiilasha badan ayaa sii wata inuu koraan:
Waxaa la sheegay in fogaantu ay wadnuhu ka dhigto mid jecel, iyadoo maanka lagu hayo in qoysasku ay si xamaasad leh u ururin karaan oo ay u hagaajin karaan wakhti ka fog mid kasta labadii sano ee la soo dhaafay. La safrida awoowayaasha, abtiyaasha iyo abtiyaasha waligeed ka muhim ma ahayn
Iyada oo rabitaanka shirarka qoyska ee fidsan ee kor u kaca ee adduunka oo dhan, qoysasku waxay sahamiyaan habab ay ugu xidhmaan habab macno badan leh. Dhaqan ahaan, fasaxyada jiilaalka badan ee qoyska ayaa aad ugu jiray liiska siyaabaha lagu abuuro xidhidh qoys oo adag iyo xasuus waarta.
"Waxaan aqoonsannahay muhiimadda ay leedahay qoysasku inay awood u yeeshaan inay soo dhaweeyaan, ururiyaan, oo si badbaado leh u safraan ka dib fursado badan oo seegay labadii sano ee la soo dhaafay, waxay farxad gelinaysaa qalbiyadeenna inaan ku soo dhaweyno martida iyo qoysaskooda ee Jean-Michel Cousteau Resort, " ayuu yiri Bartholomew Simpson, maamulaha guud ee Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji. "Iyadoo la raacayo darajooyinka safarka jiilka badan ee sare ee liisaska baaldiyada qoyska badan ee 2022, waligeed muhiim uma ahayn in Jean-Michel Cousteau Resort la wadaago barnaamijyadeena la soo koobay iyo tacaburrada soo bandhigaya yaabka dabiiciga ah ee cajiibka ah ee meesha aan ku socono ee Koonfurta Baasifigga."
"Waxaan ku sii adkaysanay sida ay nooga go'an tahay in aan martidayada siinno fasax cajiib ah, oo xusuus leh."
Meesha ugu saraysa ee safarka jiilasha badan:
Ku habboon isku-xidhka qoyska, martida soo noqonaysa iyo kuwa cusub ee tacabur-doonka ah waxay heli doonaan fursad ay ku seexdaan goob Fijian ah oo sax ah, quusin qaar ka mid ah biyaha ugu quruxda badan adduunka, si firaaqo ah u lumiya oo sahamiyaan aagga iyaga oo sii maraya kayak badda, ama u baxsan doona jasiirad gaar ah oo loogu talagalay dalxiis. Loogu talagalay dadka socotada ah ee da' kasta leh, martida waxay sidoo kale booqan karaan mangroves, beerta luul, tuulo Fijian ah oo sax ah, ama waxay dhex mari karaan kaymo kuleyl ah waxayna ogaan karaan biyo-dhac qarsoon.
Xitaa martida ugu da'da yar ayaa lagu wanaajin doonaa booqashada Bula Club, naadiga carruurta lagu abaalmariyo ee lagu nasto, halkaas oo ay ku qaadan doonaan maalmahooda sahaminta iyo barashada adduunka ku hareeraysan iyagoo u maraya ciyaaraha iyo nashaadyada bannaanka. Carruurta da'doodu tahay 5 iyo wixii ka hooseeya waxaa loo qoondeeyey naankooda gaarka ah inta ay joogaan; iyo carruurta da'doodu tahay 6 ilaa 12 waxay ku biiraan kooxo yaryar oo uu hoggaamiyo saaxiib.
Shaqaalaha Jean-Michel Cousteau Resort si buuxda ayaa loo tallaalay, loo tababaray oo ay ka go'an tahay in ay dhaafaan heerka ugu sarreeya ee heerarka badbaadada iyo fayadhowrka ee Covid-19 iyaga oo bixinaya adeegga macaamiisha xirfadle iyo soo dhawayn leh. Shaqaaluhu waxay ku qaabili doonaan martida maro daboolan, iyo xaaladaha qaarkood gacan-gashiyada, iyadoo la hubinayo fogeynta bulshada iyo jirka. Intaa waxaa dheer, dhammaan meelaha taabashada sare waa la nadiifin doonaa oo si joogto ah ayaa loo nadiifin doonaa.
Intaa waxaa dheer, Dalxiiska Fiji wuxuu abuuray "Ballan -qaadka Daryeelka Fiji, "Barnaamij muujinaya hab-maamuuska badbaadada, caafimaadka iyo nadaafadda oo la xoojiyay ee adduunyada faafa ka dib iyadoo dalku uu dib u furayo xuduudaha socdaalka. Barnaamijka waxaa soo dhaweeyay in ka badan 200 oo ka mid ah goobaha dalxiiska ee jasiiradaha, dalxiisayaasha, maqaayadaha, meelaha soo jiidashada iyo kuwa kale.
Martida mustaqbalka ee Maraykanka waxay ballansan karaan boos qabsi iyagoo waca (800) 246-3454 ama iimaylka [emailka waa la ilaaliyay], iyo martida ka imaanaysa Australia waxay ballansan karaan iyagoo garaacaya (1300) 306-171 ama email ahaan [emailka waa la ilaaliyay].
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Jean-Michel Cousteau Resort, fadlan booqo fijiresort.com.
The Kooxda Shirkadaha Canyon, oo iska leh miciinka, xarunteedu tahay Larkspur, California, waxaa la aasaasay bishii May 2005. Mantra waa in la helo oo la horumariyo dalxiisyada ultra-raaxo yar yar oo lagu calaamadeeyay meelo gaar ah oo leh qaybo yar yar oo la deggan yahay abuurista a eclectic weli heer sare ah ku habboon dareenka bulshada meel kasta. . Tan iyo markii la aasaasay 2005 Canyon waxay abuurtay faylal cajiib ah oo dalxiisyo ah, meelo u dhexeeya biyaha turquoise ee Fiji ilaa meelaha ugu sarreeya ee Yellowstone, ilaa farshaxannada farshaxanimada ee Santa Fe, iyo Canyons ee koonfurta Utah.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan Fiji